म कसरी पिन्टरेस्ट ब्यापार खाता खोल्न सक्छु? ➡️ ➡️ अनुयायीहरू ➡️ ➡️
यो सामान्य हो कि व्यक्तिहरू व्यक्तिगत पिनटेरेस्ट खाता लिन चाहानुहुन्छ उनीहरूले प्लेटफर्ममा गरिरहेक सबै चीजलाई राम्रो समझ दिन। त्यो हो, सजावट विचारहरू लिन वा तपाईंको परियोजनाहरू व्यक्तिगत रूपमा सार्वजनिक गर्न एक नेटवर्किंग विधि को रूप मा।
यद्यपि ठूला कम्पनीहरूसँग पनि अवसर छ पिन्टेरेस्टमा तपाईंको आफ्नै पृष्ठ बनाउनुहोस् जसले प्रयोगकर्ताहरूसँग जडान गर्ने विचारलाई अधिक लाभ दिन्छ। सबै कुरा कम्पनीको विज्ञापन भाग वा नेटवर्क प्रबन्धन गर्ने व्यक्तिको हातमा हुनेछ।
यदि कुनै कम्पनीले बहुसंख्यक कम्पनीहरूलाई समेट्न चाहन्छ भने, त्यसपछि तिनीहरू अधिक लाभ प्राप्त गर्नका लागि सीधा विचारहरू द्वारा निर्मित हुन सक्छन्। त्यहाँबाट उनीहरूले के चाहन्छन् पूर्वावलोकन गर्न सक्छन् प्रयोगकर्ता वा उपभोक्ताहरूको लागि खोजी गर्नुहोस् र उत्पादन र सेवाहरूको सम्भावित खरीददारहरू पनि पाउनुहोस्।
पिनटेरेस्टमा व्यापार खाता खोल्नको लागि चरणहरू
सबै पृष्ठहरू जस्तै, पिन्टेरेस्टले कम्पनीहरूलाई समर्पित सेक्सन सिर्जना गरेको छ जसले यी क्षेत्रहरूलाई प्लेटफर्ममा आफ्नै विज्ञापन विचारहरू सिर्जना गर्ने अवसर दिन्छ। यो पक्कै पनि एक अचम्मको विचार हो जसले मानिसहरूलाई एक बटनको क्लिकमा वास्तविक उत्पादनहरूमा जानको लागि क्षमता दिन्छ।
पिन्टेरेस्टले पृष्ठमा यति धेरै कदमहरू नलगाई मानिसहरूलाई जडान गर्ने क्षमतामा सुधार आएको छ। तर वास्तविकतामा, सबै कुरा यो कसरी कम्पनीहरु को हरेक आफ्नो कोर्स ले निर्भर गर्दछ कुराकानी गर्ने।
कसरी पिन्टरेस्टमा व्यापार खाता खोल्ने?
व्यक्तिगत खाता लगइन बन्द गर्नुहोस्
खोज्नुहोस्: "Pinterest मा व्यवसाय खाताहरूको लागि सत्र"
प्लेटफर्म भित्र अनुरोध गरिएको डेटा राख्नुहोस्
जोड्न नभुल्नुहोस्: लिंक सिर्जना गर्न तपाईंको वेबसाइट, कम्पनी अवस्थित भएको देश, प्लेटफर्ममा संवाद गर्नको लागि भाषा।
त्यसो भए तपाईले सर्तहरू स्वीकार्नुपर्नेछ र पृष्ठको अर्को पृष्ठमा क्लिक गर्नुहोस्
तपाइँको व्यवसायलाई एक क्षेत्रमा फोकस गर्नुहोस् र तपाइँले यसलाई स्वीकार्न दिन पर्छ
तपाईं राख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं उत्पादन वा सेवा प्रचार गर्न चाहानुहुन्छ
अन्तमा तपाईले एउटा पिन सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ वा केवल व्यापार खातामा रिडिरेक्ट गर्नुहोस्
एउटा चीज जुन तपाईंलाई पृष्ठमा आफैं मिसिन मद्दत गर्दछ जनतामा कनेक्ट हुनको लागि क्षमता पिनहरू सिर्जना गरेर। निस्सन्देह यी एक चीजहरू मध्ये एक हो जुन जनताले चाहेकोमा दूरी छोटो पार्दछ।
किन Pinterest मा एक व्यापार खाता महत्त्वपूर्ण छ?
Pinterest पृष्ठ राम्रो बनाउनको लागि, यो अत्यन्त आवश्यक छ कि कम्पनीहरूको प्रमाणिकरणहरू छन्। यो निस्सन्देह वेब भित्र घोटाला को सम्भावना कम गर्दछ र यसैले विशिष्ट जानकारी प्रदर्शित।
आज, पृष्ठहरूले आफ्ना प्रकाशनहरू अन्य स्ट्रटमा पुग्न प्रमोशनहरू संयोजनको साथ बनाउन सक्दछ। जे होस्, यी सबै चरणहरू सही रूपमा गर्नु आवश्यक छ र निश्चित रूपमा एक निर्दिष्ट हेडिंग लाइनको साथ।
यी सबैलाई दिईएको छ भने, पिन्टरेस्ट खाता सिर्जना गर्नाले बजारमा ठूलो पहुँच प्राप्त गर्न सबै सञ्चारको पक्षलाई सब भन्दा राम्रो बाहिर ल्याउन सक्छ, दर्शकहरू जे भए पनि।
1 पिनटेरेस्टमा व्यापार खाता खोल्नको लागि चरणहरू
1.1 कसरी पिन्टरेस्टमा व्यापार खाता खोल्ने?
2 किन Pinterest मा एक व्यापार खाता महत्त्वपूर्ण छ?